ဆန်းကြယ်သော အင်တာဗျူးမေးခွန်း ၈ခု | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / ဆန်းကြယ်သော အင်တာဗျူးမေးခွန်း ၈ခု
ဆန်းကြယ်သော အင်တာဗျူးမေးခွန်း ၈ခု
Staff Writer 16:58 featured Edit
အမေရိကန်ရှိ အင်တာဗျူ : မေးခွန်း ၂၅၀၀၀၀ ခန့်ကို စစ်တမ်းကောက် ကြည့်ရာတွင် အောက်ပါ မေးခွန်း ၈ခုသည် ဆန်းကြယ်သော ထိပ်တန်း မေးခွန်းများဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ လေယာဉ်ပျံ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုမှာ သင်တစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့မယ်ဆို သင်ဘာလုပ်မလဲ??? ၂။ သင်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ၉၀ရာစုခန့်က ယို ??? ၃။ သင့်အိပ်ယာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာ မဖတ်ရသေးတဲ့ မေးလ် အစောင် ၂ထောင်ခန့် ရှိနေပြီး တကယ်တမ်း ပြန်ဖြေရမှာက အစောင် ၃၀၀ပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်မေးလ် ဟာ ပြန်ဖြေရ မယ့် မေးလ် ဟုတ်မဟုတ် သင်ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ???
၄။ Spiderman နဲ့ Batman ချရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲ??? ၅။ သင့် အတွက် တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထုတ်ပေးမယ့် စက် သာရှိမယ်ဆို အဲ့ စက်အတွက် သင်ဘာပြန်လုပ်ပေးမလဲ??? ၆။ မနက်စာကို ဘာစား ခဲ့သလဲ??? ၇။ မျက်လုံးမမြင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အဝါရောင်ဆိုတာ ဘယ်လို အရောင်မျိုးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြမလဲ??? ၈။ သင်ကြိုက်နှစ် သက်ဆုံး Disney Princess က ဘယ်သူလဲ???
Credit : http://www.cbsnews.com/news